VirBELA: Fihaonambe virtoaly amin'ny lafiny 3 | Martech Zone
Ny fihaonana lavitra dia nanjary manokana kokoa niaraka tamin'ny sehatra antsoina hoe VirBELA. Tsy toy ny fampiharana fampisehoana an-tsary toy ny Facetime, Zoom, Messenger, Microsoft Teams, Google Meet, tena hafa mihitsy io iray io.
VirBELA dia mametraka anao ao anatin'ny tontolon'ny campus toa D-3 izay mifanena aminao amin'ny alàlan'ny fandehanana manodidina mifampiresaka, mifampiresaka amin'ny fomba hitanao raha miaraka amin'ny vatana ianao fa tsy amin'ny tontolo virtoaly. Tsy toy ny tontolon'ny lalao traikefa nahafinaritra na Fiainana faharoa, ny tontolo virtoaly nomen'i VirBELA dia matihanina amin'ny orinasa. Manolotra oniversite avo lenta misy birao, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fihaonambe, efitrano fandraisam-bahiny ary koa foibe fampirantiana maoderina mibaribary natao miaraka amin'ireo trano fisehosehoana ara-barotra.
Ity habaka fanangonana 3-D ity dia natsangan'ny orinasa mpiorina trano tamin'ny voalohany eXp Realty fomba iray ahazoana tombony mifaninana amin'ireo mpifaninana. Satria ny orinasam-pandraharahana hafa dia mbola nofenoina tranobe lafo vidy mba hanomezana toerana sy fiaraha-miasa ny mpiasa sy ny agents, nitahiry vola be ny eXp tamin'ny fanesorana ny filàna fananana ara-barotra, ny fotoana fivezivezena, ny fifamoivoizana ary ny fahasahiranana biriky sy mortara maro hafa.
VirBELA dia teknolojia manakorontana an'ny realty ho an'ny indostria mahazatra ny fanelingelenana ara-teknolojia. Miasa tsy misy trano tena izy, ny eXp Realty dia nitombo hatramin'ny nanombohany ka hatramin'ny lasa agents 29,000 mahery. Amin'ny ankabeazany, ny mpiasa ao aminy, ny CEO, ary ny agents-ny dia afaka miasa amin'ny fanamorana ny trano.
Ny tambin-karama izay azon'ny orinasam-pandraharahana mividiana ny agents, dia tapahan'ny fihenan'ny vola lany amin'ny orinasa. Manome hery ny olon-drehetra hanao ny asany ao anatin'ny tontolon'ny oniversite misy orinasa nefa tsy miala ao an-trano dia tsy nampihena ny fandaniana mihoatra ny vidiny mba hampisondrotana ny fidiram-bolan'ny agents, fa nanjary nahomby sy haingana kokoa ny fiofanana sy ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa. Nahazo fiofanana haingana kokoa izy ireo ary manana fidirana mivantana eo noho eo ho an'ny mpiasa manohana.
Na dia misy aza ny kaonferansa misy ny horonantsary, ny fiaraha-miasa lavitra dia mety toa mitoka-monina. Ny tontolo 3-D an'i VirBELA dia manampy amin'ny fandosirana ny fitokanana ara-tsosialy, hahatonga azy io hahatsapa ho toy ny miaraka ao amin'ny efitrano iray, ary tsy mila headset VR. Mampiasa zana-tsipìka amin'ny klavinao dia afaka mandeha manodidina ianao, mifanena amin'ny olona, ​​mifanome tanana, mifampiresaka, miara-mandehandeha eny an-tsekoly, ary mametaka dihy aza.
Eo afovoan'ny endrika misy gamified, ny tanjona azo ampiharina indrindra dia ny famokarana vokatra amin'ny alàlan'ny fampivoarana ny fifandraisana. Ny efitrano fihaonambe, efitrano fivoriana, efitrano fianarana, ary birao dia samy misy efijery goavambe eo amin'ny rindrina hizarana ny atin'ny efijeryo, tranokala, valan-dresaka an-tsary na fampiharana fiaraha-miasa amin'ny ekipa hafa. Ny zavatra iainanao dia dingana maromaro manakaiky ny fihaonana mivantana.
Amin'ny fomba ataonao amin'ny tontolon'ny tena izy, ny olona ao amin'ny VirBELA dia afaka manorina fifandraisana amin'ny alàlan'ny karazana fifandonana ara-tsosialy izay mety hataonao any amin'ny birao orinasa na mivezivezy amin'ny foibe fivoriambe. Tahaka ny mijoro eo anilan'ny hafa ianao, mivory amin'ny vondrona. Amin'ny maha avatar anao misy feo spacial anao dia afaka mipetraka eo amin'ny latabatra fihaonambe ianao mihaino ilay olona eo ankavananao eo amin'ny sofinao ankavanana, ny ankavia eo amin'ny sofinao ankavia misy feo 3-D. Mihodina ianao mijery ny efitrano rehetra, mifampiresaka amin'ny fomba tokony hataonao raha mila mifanakalo varotra kilometatra matetika ianao mba hiarahana.
Rehefa avy nandidy a VirBELA Team Suite ho an'ny orinasako, Douglas Karr dia iray amin'ireo olona voalohany tonga tao an-tsaina nampahafantatra azy io. Satria i Doug sy izaho dia samy mpivarotra dizitaly ao Greenwood, mitovy ny fiteninay amin'ny lohateny mitarika, ary fantatro koa izy fa mifampiraharaha amin'ny fitantanana tetikasa dizitaly misy mpanjifa lavitra sy ekipa miparitaka ara-jeografika. Ny fizarana efijery sy ny webcam dia manana ny toerany amin'ny fomba fifandraisanay, na dia indraindray aza tsy asehontsika amin'ny fakan-tsary ny endrikay tsy voahidy. Amin'ny fakantsary na tsy misy fakan-tsary dia ahafahanao maka tahaka ny fisian'ny fiarahamonina ao amin'ny efitrano iray miaraka.
Rehefa mila horonan-tsary ianao hampitomboana ny teninao amin'ny fisehoan'ny endrika, VirBELA no manao azy. Azonao atao ny milaza fa ny ankamaroan'ny zavatra azon'ny Zoom atao, dia ataon'i VirBELA koa. Ny traikefa amin'ny fidirana amin'ny efitrano iray sy hiresahana amin'ny olon-kafa ao amin'io efitrano io dia iray amin'ireo faritra voajanahary indrindra amin'ny traikefa an-tserasera VirBELA izay tsy teo tamin'ny vokatra hafa. Mety ho kisendrasendra izany, saingy herinandro vitsivitsy taorian'ny nahitako olona niaraka taminy Facebook tamin'ny anaran'ny avatar nirenireny tao amin'ny campus public VirBELA, Zuckerberg dia nanambara fa ny anaran'ilay fampiharana kaonferansa vaovao dia RENOM-PIRENENA.
Na dia manana biraon'ny olona tokana aza i VirBELA, dia mahavariana ireo habaka lehibe kokoa. Manana efitrano Expo goavambe ankehitriny izy io izay natsangana niaraka tamin'ny trano fisehosehoana, faritra miserana tsy miankina ary maro hafa.
Ny fomba tsara indrindra hahalalana ny atao hoe VirBELA sy izay azony atao ho anao dia ny andramo izany for ny tenanao. Anisan'ny fototry ny mpanjifa ny haben'ny fikambanana ao anatin'izany ny oniversite avo lenta, ny Fortune 500's, ny maso ivoho Mom & Pop, ny ivon-toerana serivisy ho an'ny mpanjifa lavitra, ny orinasam-panofanana maro (satria misy efitrano fianarana ihany koa), sy ny birao fiaraha-miasa / ifampizarana. Na VirBELA na sehatra vokatra hafa mbola tsy navotsotra dia resy lahatra aho fa ny habaka virtoaly 3-D no lalana izay alehan'ny kaonferansa lavitra.
Ny programa Affiliate VirBELA dia ahafahan'ny tompon'ny Team Suite mahazo komisiona amin'ny varotra vaovao ary manome tapakila ho an'ny fihenam-bidy amin'ny volana voalohany. Raha tianao izany jereo VirBELA, ampahafantaro ny tenanao ary afaka hihaona mivantana amin'ny olona ao amin'ny campus izahay.
Manomboha amin'ny VirBELA maimaim-poana
Fampahafantarana: Mampiasako ny rohy mpampifandray ahy VirBELA
Tags: Dimension 33dhetsika marketingtraikefa nahafinaritraimmersivevirbelafihaonambe virtoaly